Usoro mmekọrịta na WordPress gị Dashboard | Martech Zone
Usoro mmekọrịta na WordPress gị
Usoro Ọhaneze Pro bụ ihe mgbakwunye WordPress akwụ ụgwọ nke na-akwado tweets, mmasị, pin, + 1s na ndị ọzọ ziri ezi na dashboard WordPress gị!
Njirimara nke Social Metrics Pro
Sochie Ama Ama nke You Na-eche Banyere - Dashboard iji lelee ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ntanetị mgbasa ozi mmekọrịta dịka Twitter, Facebook, Google, Pinterest, StumbleUpon na LinkedIn. Choose na-ahọrọ netwọk ị chọrọ soro.
Agba na-egosi ikwu Popularity - Social metrics Pro egwuregwu Excel-dị ka keonodu formatting. Ozi ndị nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu na-egosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ozi ndị nwere obere ọrụ mgbasa ozi na-egosi amba na uhie. Gbanwee ihe ndị na-acha uhie uhie na ị nọ n'ụzọ ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta.
Wijetị na Extensions Njikere - You nwere ike ịgbatị arụmọrụ site na iji wijetị arụnyere na mpụga. Hụ stats ọhụrụ na dashboard WordPress gị, Nweta dashboard site na WordPress admin mmanya na ọbụlagodi ngosipụta ọdịnaya gị na-ewu ewu na blog sidebar ma ọ bụ ebe ọ bụla na saịtị gị.
Iru, Chọọ, Họchaa Youzọ Want Chọrọ - Wepụta data gị iji chọpụta nke posts kacha arụ ọrụ na netwọkụ mmekọrịta. Mee ọchụchọ isiokwu iji na-amụ ihe metụtara ụfọdụ isiokwu. Họchaa site na ụdị nzipu ozi, otu, ụbọchị mbipụta ma ọ bụ ndị na-ede akwụkwọ.
Bupu na Excel maka nyocha ọzọ - Social metrics Pro na-ahapụ gị mbupụ ẹdụk, ota data na omenala gbara ajụjụ Excel. Ga-enweta data na tab-delimited na rikoma-kewapụrụ faịlụ. Nwere ike iji Excel ma ọ bụ ihe ntanetịime ọ bụla ị họọrọ.
Nchekwa onwe-melite - Social Metrics Pro na-akwado 1-pịa arụmọrụ akpaaka-melite. Can nwere ike imelite Social Metrics Pro gị na otu pịa site na WordPress mmelite peeji nke, ma ọ bụ melite ya aka ma ọ bụrụ na-amasị gị. Nwere ike ịhọrọ ịhọrọ ozi email mgbe ọ bụla wepụtara nsụgharị ọhụrụ.
Ngosipụta: Njikọ njikọ anyị maka Social Metrics Pro gụnyere na post a.
Tags: elekọta mmadụ metrics proelekọta mmadụ ngwa mgbakwunyewordpress pluginwordpress na-elekọta mmadụ ngwa mgbakwunye
Nnwere onwe nke Blog
Ihe CMO kwesịrị ịma banyere nbanye nbanye
Jun 28, 2013 na 8:50 AM
Daalụ maka bipụtara anyị nnukwu ederede maka anyị. Nke a kachasị mma maka blọọgụ ọ bụla metụtara teknụzụ.